MADII ODUU OMN. ODUU IJOO Sad-26/2020 – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMADII ODUU OMN. ODUU IJOO Sad-26/2020
Qeerrowwan Godina Arsii magaalaa Roobee irraa OMN’f yaada isaani laatan akka jedhanitti Labsii xumura gabrummaa Qeerroo Oromiyaatin labsame hamma nuuf danda’ameetti hojirra oolchaa jirra jedhan. Qeerroon magaalaa Roobee Daandilee konkolaataa iddoo gara garaatti cufuun naannichatti sochiin hawaas diinagdee akka hin jiraanne taasisuun hamma danda’ametti labsicha milkeessuuf hojjataa akka jiran bilbilaan OMN’tti himaniiru.
Abbootiin qabeenya waamicha Qeerroo jalaa owwachuun akka labsichi milkaawuf konkolaattoota isaanii dhaabuun manneen daldalas cufanis, Waraanni Mootummaa Abbaa irree daldaltootaa fi abbootii qabeenyaa dirqisiisuun manneen daldalaa bansiisaa jiru kan jedhu maddi keenya kan garasii dubbifne kun, daldaltoota jalaa didaniin yoo gara hojiittii kan hin deebine taate adabbi gurguddootu isin egattaa jechuun doorsisaa akka jiranis himameera. Rakkoo nageenyaatiin wal qabatee Hidhaa fi dararaanis magaalattii keessatti cimee kan itti fufe jiru tahus maddi keenya kun ibseera.
Godina Harargee bahaa Aanaa Gursumitti Labsiin Xumura gabrummaa qeerroo Oromiyaatiin yaamame cimee kan itti fufe tahuu jiraataan magaalattii irraa yaada isaa OMN’iif laate ifoomse.
Labsii kana danquuf Murni Afaan Qawweetiin biyya bulchaa jiru karaa Miidiyaatiin osoo hin taane keessoodhaan dabballoota isaa facaasee hawaasa doorsisaa jiraachuus eere.
Doorsisaa kanaan Qeerroowwan qabsoo amma gaggeeffamaa jiru keessatti adda durummaan qooda isaanii baha jiran irratti tarkaanfii fudhanna jechuun dhiibbaan nurratti godhamaa jira kan jedhan Qeerrooon Harargee bahaa haa tahu malee nuti qabsoo jalqabne irra of duubatti akka hin deebine firaa fi diinnis beekuu qaba jedhan.
Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaa Magaalaa Ajjetti hidhaa fi doorsifni Poolisii Oromiyaatiin Ummata nagayaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufe jira, daa’imman harma hootu osoo hin hafne mana hidhaatti ugguramtee jirti jedhan jiraattonni. Akka jiraataan naannawa sanii tokko bilbilaan OMN’tti himetti, Labsii Xumura Gabrummaa Qeerroon labsame bu’uura godhachuun hawaasaa fi Qeerroon magaalaa Ajjee guyyootaan dura Mana hidhaa Aanichaa tokko cabsuun Hidhamtoota siyaasaa kanneen lakkofsaan 200 ol ta’an baasanii turan.
Humnoonni Mootummaa Abbaa irree namoota mana hidhaatii cabsanii bahan kanneen bakka isaan itti dhokatanii barbaadaa fidaa jechuun maatii isaanii mana hidhatti guuranii dararaa jiran jedha maddi keenya Arsii lixaa irraa odeeffanne kun. Humnoonni kunneen Dubartoota fi daa’imman xixiqqoo harma hootus mana hidhatti ugguranii hiraarsaa jiru jedha. Hanga ammaatti Maatiin lakkofsaan Sagalii ol ta’an hidhamanii jiraachuu kan himu jiraataan Aanaa Shaallaa kun, erga gaafa hidhamtoonni harka isaaniitii miliqanii bahanii fi Obbo Fanjaa Woyyaa rasaasa loltoota sirnichaatiin lubbuun isaa darbiteeti kaasee haalli nageenyaa magaalaa Ajjee keessa jiru boora’ee jira jechuun jiraataan Naannichaa kun bilbilaan OMN’tti himee jira.
Qeerroon kun dhaamsa isaa Ummataaf dabarseen, sirna Nama nyaataa kana hundeen buqqisuuf bakka jirru cufaa Ummanni Oromoo tokkummaadhaan qabsaa’uu qaba jechuun dhaameera.
Harargee Baha magaalaa Awwadaayi keessatti waraanni Murna Abbaa irree Naannawa sanitti bobbaafame jiru hawaasa nagaha darara jiraachuu jiraattonni dubbatan.
Guyyaa kaleessa dabalataan humna waraana haarawa mana baruumsa sadarka lammaffaa magaala Awwaadaayi keessaa qubsiisuun Waan isaan uffatanii fi nyaata isaanii fidaa jechuun hawaasa dirqisiisanii waan barbaadan hunda irraa fuudhaa akka jiran jiraataa gamasii dubbifne kun bilbilaan OMN’tti himeera
Magaalaan Awwaadaayi yeroo amma dirree waraana fakkaattii kan jedhu maddi kun, qeerroon Naannichaa garuu osoo waraana abbaa irreetiif hin jilbiifatin labsi xumura gabrummaa kana milkeessuuf jechaa akkasumas hanga hayyootaa fi hooggantoota keenyaa hidharraa baafannutti falmaa keenyaa ittii fufna jechuun cichoominna qaban ibsaniiru
Itti Aanaa hoogganaa KFO godina Shawaa bahaa kan ta’e namni Obbo Jibriil Amaan jedhamu Humnoota Waraana Bilxiginnaatiin doorsifni narratti raawwatamaa jira jechuun bilbilaan OMN’tti himeera. Obbo Jibriil ji’oota 4 dura Magaalaa Adaamaa keessaa qabamuun Mana hidhaa Godina Arsii keessatti himannaa dharaatiin dararaan irra gahaa turuu dubbateera.
Kanuma irra dhaabbachuun Obbo Jibriil Amaan yeroo lammataaf humnoota tikaatiin hordofamaan jira waan ta’eef sodaa nageenyaa guddoo keessa jira jechuun dubbateera.
Obbo Jibriil akka jedhuttti KFO’n dhaaba seera guutee socho’aa jiruudha, kana ammoo murni Humnaan biyyattii bulchaa jiru akka dhaaba shoorarkeessatti fudhachuun Miseensoota dhaabichaa fi deeggartoota isaa adamsuun sirrii miti jedheera. Haaluma wal fakkaatuun itti gaafatamaan paartii KFO godina Jimmaa Obbo Umar Xaahir guyyaa sadi dura Finfinnee irraa butamee gara Jimmaa geeffamuun iddoo hin beekamne eega buufamee booda kaampii polisii Humna Addaa Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessatti hidhamee argamuun beekameera. Obbo Umar maatii waliin akka wal hin argine dhorkamuus madden magaalaa Jimmaa hubachiisanii jiru.
Yeroo ammaa Oromiyaa keessatti Miseensoota ABO fi KFO xiyyeeffannaa keessa galchuun balleessaa tokko maletti waraanaan adamsuun hidhaatti darbachaa akka turan nutis yeroo gara garaatti gabaasaa turuun keenya kan yaadatamuudha. Godina Wallaggaa bahaa magaalotaa fi Aanaalee gara garaatti Labsii fincilaafii xumura gabrummaa akka guutuu oromiyaatti Qeerroo Oromootiin labsameen wal qabatee akka Qeerroon Labsicha hojirra hin oolchineef waraanni murna Bilxiginnaa heddumminaan garasitti bobbaafamuun Qeerroo hedduu hidhatti guuruun ummata nagayaa dararaa jiraachuun himame.
Aanota akkaa Bonayyaa Boshee, Waamaa Haagaloo, Siibuu Siree,Haroo Limmuu fi kanneen hafan biroo keessatti Poolisoonni Addaa Oromiyaa maqaa sakatta’iinsa ABO jedhuun Paatrooliidhaan ganda keessa deemuun Dargaggoota rifeensa dhedheeraa qaban qabanii gogaatti irraa haaduun Shaneedhaaf Nyaata geessitan sababa jedhuun fuudhanii hidhaattii darbachaa jiru jedha jiraataan Godina Wallaggaa bahaa Aanaa Bonayyaa Bosheerraa bilbilaan dubbifne kun.
Qeerroon Godinichaa haala kana keessattis osoo abdii hin muranne keessaa wal gurmeessinee qabsoo keenya finiinsuudhaan Hayyoota keenya mana hidhaattii dararamaa jiran baafannee murna afaan qaawweetiin biyya bulchaa jiru kanatti xumura gochuuf hojii boonsaa hojjachaa jirra jedhan.
Duuti manattis nurraa hin ooltu kan jedhan qeerroowwan kunneen murni shiftaa kun networkii balleessee akka sagaleen keenya hin dhagayamneef Qeerroo hedduu fixuun duguuggaa sanyii nurratti raawwachaa jiran waan ta’eef Wallaggaa Bahaafi Lixaatti akka abbootii keenya kan durii xalayaadhaan wal qunnamne socho’aa jirra injifannoos galmeessaa jirraa jedhan.
Ethiopia: Tigray Region Humanitarian Update Situation Report No. 5
Ilmaan Oromoo galmee Takkaaleny Mardaasaa jala jiran jimaata M/murtii dhiyyaatu